Amakhowe: malunga neenzuzo kunye nezibi
Amakhowe ayanconywa ngenxa yephunga elimnandi kunye neentyatyambo. Oogqirha, abadli beentlanzi bathi ngamakhowa "inyama yehlathi." Baxelela ukuba le mveliso iyanelisa indlala kakuhle. Kwimithi yabantu, amakhowa axabiswa njengamayeza, kwaye abapheki balungiselela izitya ezilungileyo kubo. Kodwa wonke umntu uyazi ukuba akunakwenzeka ukuhleka ama-mushroom - ukuhamba okungahambi kakuhle, kwaye unokudala iingxaki ezinkulu kuwe.
Ngoku kukho iintlobo ezilikhulu zamakhowe, ezingasetyenziselwa ukutya. Amakhowe azinakulungi nje njengesitya esahlukileyo, kodwa adibanise kwiisobho, i-salads, okusanhlamvu, i-ragout, i-sauces kunye nezitya zepatati. Zithandwa kakhulu ngenxa yezinto zayo eziyingqayizivele, ezinamakha neziqhamo, ngenxa yolu hlobo lunomdla olumnandi.
Ama-mushroom aqukethe amafutha (1%), iiprotheni (ngaphezu kwe-5%), i-carbohydrate (3%), ngaphezu koko, luncedo kumzimba wethu kunye nokukhethwa kwezinto - insimbi, ithusi, i-potassium, i-cobalt, ithusi, i-calcium kunye nabanye.
Sifanele sifeze i-potassium ngokufana ne-sodium, leyo umzimba wethu ufumana umlinganiselo omkhulu kwindlela yetyuwa yetyuwa. Ngoku kutya kwethu kukho ukutya okuninzi okwenziwe ngokugqithiseleyo ngamakhako okanye emathinini, eyingozi kakhulu kwimpilo yethu. Yingakho ufuna ukunciphisa ukusetyenziswa kwaloku kutya, kwaye kukho ezinye iifungi apho i-potassium iqulethwe khona.
Ngama-mushroom imfuneko yansuku zonke yendalo ye-potassium -120 mg iqulethe, kwaye kuyimfuneko kuthi sikwazi ukuhlala kunye ne-phosphorus kumagxa namazinyo.
Ukuba udla i-calcium kunye ne-phosphorus kunye, ngoko-ke ihamba ngokukhawuleza ngokukhawuleza. Xa zisetyenzisiweyo, inani labo kufuneka libe ngu-1: 1.5. Ukongezelela, iiphosphorus izixhobo zinceda ukuhamba kakuhle kwiinkqubo zamanzi ezisiseko emzimbeni. Umntu kufuneka adle 0.8 g we-phosphorus ngosuku.
Iifom ze-Cobalt ze-erythrocytes, ukuba emzimbeni awanakho, i-anemia ibonakala.
Eyona nto imfuneko ebomini bomntu, ubhedu, i-zinc, ne-manganese, enokufumaneka kunye nokusetyenziswa kwamakhowe.
Iifungi ziqulethe i-amino acid eziyi-18, ezenza ukuba imemori, umsebenzi weengqondo, uphazamise ukuphuhliswa kwe-atherosclerosis.
Zonke i-microelements ezityebi kwifungi, sidinga ukulungiswa kwemetabolism, ukunciphisa umngcipheko wokukhula kunye nokubonakala kwezifo zenhliziyo. Ukongezelela, ezi nyi-microele ziphazamisa izifo zentsholongwane.
IiVithamini zeqela B (B1, B2, B6) zivumelekile ukuba zisebenze ngokuqhelekileyo kwinkqubo ye-nervous kwaye ziyimfuneko kakhulu kwiimeko ezintle zezipikili, isikhumba kunye neenwele. Ngama-mushroom ala mavithamini ngakumbi kunokuba kusetyenziswa okusanhlamvu kunye nemifuno.
I-B-glucans iqinisa isimiso somzimba, kwaye ngaphezu koko, ezi zinto zithintela ukubonakala kwezidumbu. Kodwa ukuze bakuncede kufuneka usebenzise iikhilogram ezimbalwa kwixesha elifutshane.
I-Melanin yi-antioxidant yemvelo.
I-mushroom chitin isusa insimbi enzima emzimbeni.
I-Vitamin PP iyomeleza iindonga zeempahla kwaye zichaphazela kakuhle iinxalenye ze-hematopoiesis. Ngama-mushroom le vithamini iyafana nesibindi sesilwanyana.
Ukongeza kuzo zonke izakhiwo ezixhamlayo, i-fungi iqukethe iivithamini ezinqumle amafutha D, C no-A. Iprotheni kuma-mushroom iphindwe kabini kunjengeqanda, kwaye kathathu ngaphezu kwenyama.
Amakhowe asetyenziswa kwiinjongo zokwelapha. Ukunyanga inkqubo yeentlanzi kumachiza omntu, i-fly agaric isetyenziselwa ukuphilisa utywala - umquba, izicubu kunye ne-radiation leukopenia - i-birch i-mushroom chaga.Ochen amnandi amakhowe amhlophe (i-boletus) ine-antitumor ne-tonic effect.
Sonke siyazi ukuba abaninzi abantu bangena esibhedlele ngokudibanisa amakhowe. Isizathu salokhu ukungakwazi ukuhlukanisa iifungi ezingenakudliwa kwizinto ezidliwayo, ukufumana ama-mushroom kwiindawo ezibuhlungu, ukungabikho kolwazi olusisiseko malunga nemiphumo yomsebenzi wabantu kwi-chemical and biological composition of fungi, nangaphezulu. Abaqashi be-mushroom badla ngokutshabalalisa i-creeper, ukuqokelela le mveliso. Ungayisebenzisi kakubi ukutya okudliwayo, i-mushroom epholileyo kwaye epholileyo, ngenxa yoko, inokuvela kwizifo zesigca esiswini. Ukongeza, loo fungi imithombo yamandla, ehlaziya i-mycelium.
Kukho ama-mushroom angama-20 kwaye ayifanele ukutywala: i-red agaric, i-toadstool ephahleni (i-fly agaric) kunye neentlobo ze-agaric ephaphaza, ikhanda elimnyama-oluhlaza okwesibhakabhaka, i-mushroom ka-satanic, i-chanterelle, i-raincoat, i-stitch, i-scaly emnyama okanye i-mushroom yama-mushroom kunye nabanye. Ngokuqhelekileyo, ngokuqinisekileyo, kukho iziqhamo ezingenayo i-mushrooms enobuthi, kwaye oko kuthiwa ukutya, umzekelo omhle ngulube onqabileyo. Iifungi kwixesha ngalinye lokukhula kwazo zinomlinganiselo ohlukeneyo wobuthi, ngaphezu koko, ziyahluka kwiimeko zokuphuhlisa kunye nepropress. Iingcali zithi amaxoxo akhula kwimihlaba ehlwempuzekileyo engaphantsi kobutyhefu kunezo ezikhulayo kwiimeko zokuphakama okukhulu kwihlabathi.
I-Chitin, efumaneka kuma-mushroom ngokwemali eninzi, ayifumanekanga emzimbeni womntu. Ngako oko, bahluthe kakhulu. Ukongezelela, ukuba i-fungi iyingozi kakhulu, inokukhokelela kwi-pancreatitis engapheliyo kunye nokuvuvukala kwepascreas.
Ngenxa yomxholo ophezulu we-chitin, ezinye zeepesenti eziqulethwe kwimveliso azifinyeleleki kumzimba.
Abantwana abaneminyaka engaphantsi kwe-13-14 ubudala abanako ukugaya i-chitin. Ukuba awufuni ukuba umntwana wakho aqale ukusebenza emzimbeni, ungamvumeli adle amakhowe.
Amakhowa - esi sisityalo esinokubamba kwiimveliso zomsakazo we-toloksiny. Qaphela xa uqokelela. Khetha indawo enobungane, ukuze ungonakali impilo yakho.
Xa uphuma waya ehlathini kuma-mushroom, faka kwibhaksi kuphela ezo ungenakutheni. Musa ukuzithemba ngethuba, ungalimazi impilo yabathandekayo bakho kunye nawe ngokukodwa. Kukho iimbungulu ezithandathu ezithi zitshise emva kokubilisa ziyobuthe: i-fibre, i-toadstool ephahleni, i-fly agaric, i-fly stain, i-flywort, i-fly agaric, i-panther i-fly agaric. Gwema la ma-mushroom, nokuba kunjani na ongenakukudla.
Kwi-inshorensi, uphathe kakuhle amakhowe onke. Nokuba ubilise ama-mushroom ubilise ubuncinane imizuzu elishumi elinesihlanu, kodwa khumbula ukuba kwiqondo lokushisa lama-digridi angama-100, phantse zonke izinto ezincedo ziyabhujiswa.
Ukuba uthe walungisa ngokufanelekileyo amakhowe waza wabonwa kakuhle, ngoko baya kukukholisa. Kubalulekile ukuba umncedisi uyazi ezinye izinto. Ngokomzekelo, ukwenza amakhowe ngokukhawuleza atye kwi-finer. Khumbula ukuba ininzi ye-chitin iqulethwe emilenzeni, ngoko kufuneka ihlulwe iincinci kuneefowuni.
Kungakhathaliseki ukuba ulungiselela amakhowe, zizonke ukutya okunzima, ngaphandle kwekamela elinamafutha omakhowa kunye nama-mushroom broths. Kodwa xa udla ama-mushroom, zikhusele ekudleni kunye nokukhuluphala, kuba le mveliso inegalelo ekulahlekelweni kwesisindo.
Ungagcina njani ama-mushroom?
Kubalulekile ukuba ukhumbule ukuba emva kokuba usike umkhuhlane, kufuneka uphekwe okanye uqhutywe ngokukhawuleza, ngenxa yokuba emva kweeyure eziyi-4 ukuya ku-5, kwi-metabolites yesibili iqala ukuqokelela kuyo. Akunakwenzeka ukuwagcina kwi-polyethylene, tk. Ikhawuleza inkqubo yokubola ngenxa yokungabikho komoya kunye nomswakama ukuba isikhunta sifake. Ngoko ke, benza izinto eziyingozi kubantu. Kungcono ukuwabeka kwifriji kwiibhotile ezineendonga ezinzima.
Izitya ezenziwe ngamakhowe kufuneka zigcinwe ngodongwe okanye izitya ezifakwe kwifriji.
Ukuba izinto ezinobungozi ngokungazelelwe zingene emzimbeni womntu, ngoko kunzima ukuzihoxisa kwaye ngamnye umntu unalo amaxabiso ahlukeneyo. Kwiimeko ezinjalo, umntu makangabandakanyeki kwiyeza, kodwa kufuneka afike esibhedlele kwangoko.
Iimpawu ezifanelekileyo ze-nectarine
Ukukhulula imini kwi-oatmeal
Imveliso yokutya okukhawulezayo
Iinzuzo ze-oxygen cocktail
Ukutya okuncedo kunabo bonke kwisondlo somntu
Indlela yokuyeka ukutya ngokutya
I-Fluffy kunye neziqhamo eziqhelekileyo ze-kiwi
Indlela yokugcina impilo yengane esikolweni
Kuthekani ukuba indoda ayifuni ubuhlobo obunzulu?
U-Lady Gaga wabonisa "isisu" esikhulelwe
Izakhiwo ezisetyenziswayo nokuphulukisa ioli yeoli
Ukutya okuphantsi kweekhalori
Ihlabathi elithengisa kakhulu "i-Violets ngo-Matshi" ngoku ikwaseRashiya
Indlela yokubala iindleko zexesha elizayo
Ubisi olunomlilo owenziwe ekhaya
I-Timati yatshintsha indawo uAlena Shishkov enomzekelo oneminyaka engama-19 ubudala
Indlela yokwelula kakuhle
Iidyiphu zokubhenca i-lemon
Imfihlelo yobuhle nempilo: imithetho emine efanelekileyo
Imigaqo yentle yokutya
Ukulungiswa kwefom yebabi
Impembelelo yomlomo wezempilo ngomntu
Ikhefu lePasika likagogo